२ पुसभित्र चिकित्साशिक्षा ऐन जारी नभए डा. केसीले १६औँ अनशन थाल्ने – Health Post Nepal
२०७५ मंसिर १० गते १५:१२
चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले २ पुससम्म चिकित्साशिक्षा ऐन जारी नभए १६औँ सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । ३ वर्षदेखि संसद्मै अलमलिइरहेको चिकित्साशिक्षा विधेयक पारितलगायत ३ सूत्रीय माग राख्दै डा. केसीले सरकारलाई २ पुससम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् । सोमबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकारसम्मेलन गरेर उनले सरकार आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको साटो झन्–झन् भ्रष्टाचार र अकर्मण्यतामा भासिँदै गएको आरोप लगाएका छन् । उनले चिकित्साशिक्षा विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियामा विगतमा भएका सम्झौता उल्लंघन गर्ने गरी कुनै चलखेल भएमा कुनै पनि वेला सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणासमेत गरेका छन् ।
डा. केसीले १५औँ सत्याग्रहका क्रममा १० साउन ०७५ मा नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । उनले सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन हुने गरी विधेयक संशोधन गरेर संसद्बाट अविलम्ब चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गर्न माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, डा. केसीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायत व्यक्तिको तत्काल सिफारिसबमोजिम बर्खास्तीलगायत कारबाहीको मागसमेत गरेका छन् । त्रिवि पदाधिकारीद्वारा खोसिएका चिकित्साशिक्षा अध्ययन संस्थानका अधिकारहरू पुनः संस्थानमा फिर्ता गर्नसमेत डा. केसीले माग गरेका छन् ।
उनले सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेका छन् । नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडाैँ विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिन लगाई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न उनले माग गरेका छन् । चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्यसेवाबाहेक उनले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन र प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाउनसमेत माग गरेका छन् ।